China Flat Metal Package mveliso kunye nabenzi | Jitai
Iphakheji yesinyithi esisicaba yahlulwe yangamacandelo amabini okanye uhlobo oluninzi lokubhinca.One-piece yamkela imizobo enzulu yeemowudi, iziqwenga ezininzi zamkela isakhelo sobhedu kunye nesiseko esigqitywe ngenkqubela phambili. Indlela ekhokelayo yokukhokela kukudonga olusecaleni. Isetyenziswa kwisiphaluka esinye, indibano yeesekethe ezihlanganisiweyo.
* Iphakheji yamkela izinto zekovar okanye ingqele eqengqelekileyo yesinyithi.Ubume beqhekeza elininzi kukomeleza ukuqhuba kwe-thermal.Base yamkela izinto zeWuCu, i-Oxgyen Copper yasimahla okanye iCRS1010 njl.
* Ukuphakama kwephakheji yamkela iimfuno zabathengi.
* Izikhonkwane zahlulwe zangamaxande emnqamlezweni icandelo ukhukuliseko yemichiza okanye izikhonkwane ngeenxa zonke ngokusekwe kwimilo yecandelo lomnqamlezo ngokokhetho lwabathengi.
* Ukuma kwepini yomhlaba kumiselwe ziimfuno zabathengi.
* Isiciko siyilelwe ukuhambelana nokubonakala kwephakheji.
* Iphakheji kufuneka ibe yinkqubo yokuchonga ukuze kufunyanwe ukusetyenziswa okuthembekileyo okuphezulu kunye nokusetyenziswa kwabathengi bakhethe iiplati ezizalisa ngokupheleleyo okanye zikhokelele kwisingxobo sokukhetha okanye ngokweemfuno.
* Zonke izalathiso ziyahlangabezana neemfuno ze-GJB548B.
Icandelo lesibini: Ukhetho lwezixhobo
Ukukhethwa kwezinto zokwakha izindlu
I-CTE yinto yokuqala ethathelwa ingqalelo, indlela yokufezekisa uxinzelelo oluphantsi kufuna ukuba abasebenzi bokuyila babe nolwazi olufanelekileyo ngokusebenza kwezixhobo ezahlukeneyo.Ibonisiwe kwithebhulethi 1-ithebhulethi 2 umgaqo wokutywinwa kokucwangciswa kwezinto zeephakeji ezicaba.
Umgaqo woyilo lwezixhobo zephakheji ethe tyaba
Cavity / Isakhelo
I-W80Cu20 Cu / MO / Cu (1: 2: 1)
I-BH-G / KCoining i-7070 BH-14
4J29 Ubhedu lukhutshiwe
Elan13 # yodongwe yokwambathisa
Intambo yeCopper 4J50 4J50
I-Oxgyen yasimahla yeCopper Zirconium Copper
Umgaqo wokutywinwa kwempahla yempahla
I-Oxgyen yasimahla yeCopper
Elan13 # (Luhlaza)
4J50 4J50 Ubhedu
Ukukhethwa kwezinto ezenzelwe isiciko
Paralle ukutywina Welding: 4J42
I-Laser yeWelding: 4J42,4J29, CRS1010; Yenziwe ngentsimbi eshayinayo, AlSi
Ukujija i-Screw: 4J42,4J29, CRS1010, i-Stainless, iAluminiyam ingxubevange
Uyilo lobukhulu besakhiwo
3.1: Enye-sifuba isakhiwo cnc yokugaya
3.2: Isakhiwo esinye esitsalwe nzulu
3.3Imizimba eyahlukileyo yokwakheka kwebras
Kukho isiseko esinye nesiqwenga sesiseko esine-inlaid, kusenokwenzeka ukuba utshintshe izinto ezisisiseko zibe yi-Cu, WuCu, Dimanond braze njalo njalo kwizinto zokunyusa kakhulu ukuqhuba kwe-thermal package.
Umgaqo wezinto eziyinxalenye.
Iphakheji yeflethi yamkela ukukhokelela kubume bebhayisekile, uxande, tyaba, igobile.Nantsi intshayelelo elula yezikhokelo ezikhethekileyo:
Udidi lwentsimbi ekhanyisiweyo
Ukhokelo loxande lukhokelela kwimichiza enqamlezileyo0.3mm * 0.4mm
Iqhubekekiswa ngokucoca i-cyclinder ngqo ekhokelayo.
Ngokwemo yokuguqa, izikhokelo ezigobileyo zahlulwe zaba luxande, i-Z imilo egobileyo.Ngokwecandelo elinqamlezileyo, izikhokelo ezigobile zahlulwa zaba yibhayisekile, egosoxande.Ngamanye amaxesha sinokuyila isikhokelo esigobileyo kwiimfuno zabathengi zokusetyenziswa .
Uyilo lokukhokelela kwiphakeji ethe tyaba zi-Z ​​ezimile ezikhokelayo ezikhokelayo, izikhokelo zinokukhetha i-cyclinder okanye uxande olukhokelayo nge-diameter.80.8mm (ubukhulu ＞ 0.8mm, ayinakubotshelelwa ngeejika ezimbini).
Uyilo lwezindlu zamandla ikakhulu luxande olukhokeleyo, kwaye izikhokelo ziibhayisekile.
Egqithileyo Izindlu zaMandla
Okulandelayo: Iphakheji yeQonga
Iphakheji yesenzi soxinzelelo